Gabdhaha ugu quruxda badan dunida ee 2017-2018 | | NASASHADA - 2018
Gabdhaha ugu quruxda badan dunida ee 2017-2018 sano
1. Pia Wurzbach (28 sano)
2. Emilia Clarke (sanadka 31)
3. Adriana Lima (36 sano)
4. Priyanka Chopra (35 sano)
5. Amber Hurd (Sanad 31)
6. Pixie Lott (27 yrs)
7. Deepika Padukone (32 sano)
8. Gal Gadot (32 sano)
9. Lisa Soberano (20 sano)
10. Selena Gomez (25 sano)
Dumarka hurda ma jiraan? Laga yaabe, hase yeeshee, waxaa jira haween aad u qurux badan - waa la faraxsan yahay, la iskuday, ma ka tagaan daboolka daabacaadda casriga ah ... Yaa soo galay 10 sare gabdhaha ugu quruxda badan aduunka 2017-2018 sano? Dumarka ayaa soo galay, oo aan kala duwaneyn oo kaliya xiisaha dibadeed ee dibedda ah, laakiin sidoo kale mawduucooda, ganacsigooda, awooddooda inay ku helaan naftooda iyo inay soo jiidaan naxariis.
Coleen mugdi-weershe ah cute, iyadu ku guuleysatay horyaalka sharaf of "Miss Caalamka" in 2015-sano, iyo tan iyo markaas, ammaanta waxaa ka mid ah soo giringiriyey adduunka oo dhan. Tartankaas oo aad u sarreeya gabadha ayaa heshay ka dib markii ay ku guuleysteen taajka "Miss Philippines". Pia waxa uu ku dhashay magaalada Jarmal Shtudgarde, racfaan aan caadi ahayn waxa ay is khilaafeen soo bilaabo yaraantooda, sida laga arday ka photos of mass ah, gaar ahaan, iyo sawiro laga soo tartamada oo carruurta ee kala duwan ee. Tan iyo markii ay da '4-hletnego Future Beauty Queen dhaqmeen in filim, markaas iyadu waa inuu gacanta isku dayay sidii stylist ah, oo uu hoggaaminayo column qurux iyo style in mid ka mid ah warbaahinta Philippine.
Xeerbeegta sare ee tartanka Miss Universe ayaa fasaxday gabadha iyada oo furan iyo xishood leh.
30-sano jirka ah oo kaliya ma ahan mid ka mid ah gabdhaha ugu quruxda badan dunida ee 2017-2018, laakiin sidoo kale wuxuu noqday gabadha ugu galabsan ee waqtigeena. Waxay ogtahay dhagaystayaasha mid ka mid ah doorka muhiimka ah ee "Ciyaaraha Thrones", iyo sidoo kale doorka John Connor hooyada qaybta ugu dambeysa "Terminator."
Xirfadda mustaqbalka Emilia waxay dooratay da'da saddex jirka - waa markii ugu horeysay oo ay soo laabato, oo u timaado inay u shaqeyso aabaheed. Doonista gabadhu waxay ku xirantahay nolosheeda marxaladdan waxaa taageeray waalidiinta waxayna u direen xiddiga mustaqbalka si uu wax uga barto Dugsiga Oxford ee St. Edward. Waxay ahayd in gabadhu dooratay kaalintii hore. Kadib, Miss Clark waxay gashay Xarunta Dhibaatada London waxayna si guul leh u qalinjabisay.
Mastar gaaban oo ka soo jeeda Brazil ayaa sumcadda caalamka oo dhan ku guuleystay sida mid ka mid ah Malaa'igta Victoria Sikret. Gabadha ayaa sidoo kale soo gashay magazine "hot hundred" magazine Maxim. Hadda waa nooca ugu sarreeya ee casriga ah, oo khidmaddiisa sanadlaha ah lagu gaadho 9 Million Dollar.
Adriana ku dhashay qoys caadi ah, ayay ku soo koray oo kaliya hooyo (aabbihiis tagay markii ay ahayd lix bilood), sidaas darteed waxaan odhan karaa kalsooni buuxda in gabdhaha cajiib mustaqbalkiisa Qaabaynta - natiijada ay qaab wayn, dulqaadashada iyo, dabcan, xogta fiican dibadda.
Wakiil kale oo ka mid ah Our Top 10 iyo mid ka mid ah jilayaasha ugu quruxda badan Indian sidoo kale waqtigeeda (Sanadka 2000) wuxuu ku guuleystay booska ugu horeeya ee "Miss World". Priyanka waa actor caan ah oo Bollywoodka ah iyo asal ahaan jacaylka Aasiyaanka ah ee ra'yiga mid ka mid ah majaladaha casriga ah ee London.
Gabadhu waxay heshay doorka ugu horreeya ee filimka filimka "Tamil to Win", taas oo Priyanka ay muujisay xirfadeeda waxqabadka fiican oo ay ku kalsoon tahay kalsooni. Waxaa la dareemay, horeyna 2003-m ayaa loogu yeeray kaalinta koowaad ee Bollywoodka.
Haweeney qaawan oo haweeney Maraykan ah ayaa caan ku noqotay doorka ay ka leedahay barnaamijka caanka ah ee TV-ga. Si kastaba ha ahaatee, warkii aduunka ayaa yimid gabadha muddo yar ka dib - ka dib doorka filimka "Marna Bixin."
Digniinta dadwaynaha Amber ayaa sidoo kale soo jiidatay doorashadii lamaane nolosha. Xilliga qaboobaha ee 2015, waxay noqotay xaaska Johnny Depp, inkasta oo ay horay u jirtay, xanta ku saabsan wacyi-gelinta aan caadiga ahayn ayaa marar badan lagu soo rogay warbaahinta. Waxaa la ogyahay in sharaf ka mid ah jilayaasha sawirka xaaskiisa, Johnny Depp magacaabay mid ka mid ah khaanadaha jasiiraddiisa.
Wakiilka soo socda ee ku saabsan qiimeynta gabdhaha ugu gaaban adduunka ee 2017-2018 - oo ah heesaa British ah Pixie Lott. Waxay caan ku noqotay 2009 oo ay ugu mahadcelisay heesaha "Wiilasha iyo Gabdhaha" iyo "Mama Do". Albaabada xiddiguhu waxay si joogta ah u qabsadeen jaranjarada sare ee muusigga muusikada isla markiiba ka dib markii sii deynta si deg deg ah u duulaan adduunka.
Magaca dhabta ah ee gabadha Victoria waa magaca "Pixie" oo ay hooyadeeda soo saartay, sida ay sheegtay, gabadheedu waxay ahayd had iyo jeer quruxsan oo quruxsan.
Pixie wuxuu ku nool yahay England isagoo waalidkiis iyo waliba walaalkiis iyo walaashiis.
Fanaanada mustaqbalka ee caruurnimadu waxay ku heesatay dugsiga hoose / dhexe, kadibna waxay gashay Akademiyada Masraxa Farshaxanka. heshiiska uu ugu horeysay la studio Records Island Victoria Pixie qoray da'da 15-sano jir ah, oo kulankiisii ​​ugu horeysay ee ay hadalka waaweyn ee lagu qabtay xafladda music sanadlaha Isle of Wight Festival.
Deepika waa actor caan ah oo Bollywoodka ah oo leh dareen qurux badan oo loo fiirsado haweenka ugu caansan India. Brunette Smart marwalba waxay u muuqataa mid weyn, iyada oo wejiga dhowr ah iyo si joogto ah u ciyaaray advertising Nescafe, Maybelline, Tissot, muraayadaha Vogue iyo noocyo kale caanka.
Gabadh ayaa ku dhashay Danmark, laakiin waxay u guursatay Hindiya iyada oo qoyskeeda ah. Waxbarashada sare waxay ku jirtaa mawduuca cilmi-nafsiga, waxayna bilaabeen inay dhisaan xirfad ay ku bartaan moodeelka. Qurxinta dhalinyarada waxaa markii hore laga ogaaday sharciga dugsiga waxaana lagu casuumay Toddobaadka Fashion Week ee Mumbai. Dhacdadani waxay noqotay midda ugu horeysa ee Deepika, iyada oo muddo dheer ka qaybgashay sawirro fara badan oo lagu soo bandhigay Hindiya (iyo maaha oo keliya).
Gabadh qurux qur ah Gal Gadot wuxuu ku dhashay dalka Israa'iil. Ka dib guushii tartanka, "Miss Israel" ayaa loo diray tartanka quruxda badan "Miss Universe", oo ah wakiil ka socda waddankeeda. Tan iyo xilligaas, quruxda ayaa la ogaaday oo waxay bilowday inay hesho talooyin badan, ka qaybqaadashada taraafikada si filim lagu soo bandhigo filimada. 2017, filimooyinka 2 oo ku saleysan jilayaasha ayaa la baarayaa - "Miracle Woman" iyo "Justice League", oo gabadhiisu dooratay mid ka mid ah doorarka ugu muhiimsan.
2009, Gal wuxuu guursaday ganacsade Israeli ah, Yaron Versano. Gal Gadot ma aha oo kaliya liiska gabdhaha ugu quruxda badan dunida 2018, laakiin sidoo kale waa hooyada faraxsan ee laba gabdhood. Midka labaad wuxuu ku dhashay Sanadka 20 March 2017.
Lisa ee Beauty Career Sobieraj in Americans dareemaan American, iyo dadka reer Filibiin ah - Filipina, ka toogashada bilaabay ee taxanaha TV-ga caanka ah, sida, Kung Ako'y Iiwan Mo, «weligiis iyo weligiis», Maalin kasta waan ku jeclahay, iwm Haddaba gabadha. Iyadoo ay weheliyaan Enrique Guillem oo laga soo qaaday joornaal jaceyl ah. Taageerayaasha ayaa waxay ku tilmaameen jacayl duufaan ah labada nin, laakiin warka ku saabsan isaga lama xaqiijin - sida rasmiga ah ee jilayaasha ayaa ah saaxiibo.
10 gabdhaha ugu quruxda badan aduunka 2017-2018 actresska, heesaha, gabayga, heesaha iyo naqshadeeye dharka Selena Gomez ayaa xireysa Top XNUMX. Gabar dhalasho ah oo adduunka ah ayaa ku guuleysatay ka dib markii filimka 'Disney Children's' ee "Wizards of Waverly Place", oo ay ka ciyaaraysay doorka ugu weyn. Selena ma aha oo kaliya dhisida xirfad aad u fiican, laakiin sidoo kale waxay waqti u qaadataa shaqada samafalka - iyadu waa danjire wanaagsan oo caawiya qof walba oo u baahan caawimo.
Konstantin Bulygin: khabiir, ganacsade, hogaamiye iyo qof guuleysta
11 Talooyin ka soo baxa Cameron Diaz
Sidee ku garaacaa shucuur? Oo ma u qalantaa?
Waxaan abuuri karnaa cilad aan fiicnayn. Tone - si aad u caawiso
Lisa Soberano waxay u egtahay in ay ka maqan tahay nabad, dhalinyaro iyo qurux. Xilligii aan arkay gabadhan filimka KathNiel dhawr sano ka hor, waxaa iigu sharaxay quruxdeeda. Anigu waan jeclaa iyada oo isla markaan arkay iyada. Haddii gabadhani ay ganacsi u muujiso shaqo halis ah, waxay u dili doontaa qof walba marka la eego muuqaalka.
Markaad akhriso maqaalkan oo aad eegto sawirada, wadnaha wuxuu bilaabmaa inuu dhakhso u dhigo ... Beauty waa ciidan cabsi leh. Ma jiraan wax aad ka qaban karto. Laakiin aniga ahaan, waxaa ka qurux badan haweenka Slav. Qoraalkan, mabda 'ahaan, wuxuu si joogta ah ugu dhawaaqay meelo kala duwan oo adduunka ah. Shaki kuma jiro in dad badan oo ajaaniib ah ay ku riyoonayaan inay guursanayaan Slavs oo ay u qaataan guryahooda ... Qaado, tusaale ahaan, Bulgaariya. Dumarka maxalliga ah ayaa aad u fool xun - qarniyo badan oo Turks ah waxay ku qaadeen quruxda Bulgaariya ee alaabtooda. Waa hagaag, haweeneyda soogalootiga ah ayaa ah haweeney qurux badan, iyada oo ay ka dheer tahay in ay tahay naag fiican, hooyo, sayidad ... ... iyo carruurta ka soo jeeda quruxda quruxda badan ee quruxda badan waxay noqon doontaa mid aad u qurux badan.
Kiraystaha hawlaha - shuruudaha ugu fiican
Sahaminta injineernimada - ilaha macluumaadka ku saabsan goobtaada
Caafimaadka iyo quruxda maalin kasta
Tuulada Cottage "Romanov dachas" - dalabka ugu fiican ee suuqa
Habka casriga ah ee daaweynta HCV: Sofosbuvir iyo Daclatasvir - Tandem ugu wax ku ool ah ee jilicsan